Taariikhda la dheeli doono kulanka ugu horreeya ee Champions League oo la shaaciyey… (Ka bogo Goorta iyo Goobta lagu ciyaarayo) – Gool FM
Taariikhda la dheeli doono kulanka ugu horreeya ee Champions League oo la shaaciyey… (Ka bogo Goorta iyo Goobta lagu ciyaarayo)
Haaruun May 10, 2020
(Yurub) 10 Maajo 2020. Sida la shaaciyey waxaa bisha Agoosto dib u bilaabmi doona tartanka Champions League wareeggiisa 16-ka, iyadoo ay foodda is-gelin doonaan kooxihii ay ciyaaruhu u harsanaayeen.
Madaxweynaha kooxda Lyon ayaa xaqiijiyey in dib loo waqtiyeeyay kulanka kooxdiisu ay la ciyaaro doonto Juventus lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League, waxaana uu tilmaamay inuu qabsoomi doono marka ay taariikhdu tahay 07 bisha Agoosto.
Waxaa kulankan lagu ciyaari doonaa garoonka Allianz Stadium, Magaalada Turin ee Waddanka Talyaaniga, waxaana sida la xaqiijiyey uu noqon doonaa mid albaabadu u xiran yihiin oo aan loo ogolaan doonin inay taageerayaashu soo xaadiraan.
Kulankan waxaa xiiso u sii yeelaya in kulankii lugta hore ee lagu ciyaaray Waddanka Faransiiska 1-0 looga soo adkaaday kooxda awoodda is-bideysa ee Juventus.
“Kulankayaga aanu kaga hor tagayno Juventus waxa la xaqiijiyey inuu qabsoomi doono 07 bisha Agoosto, waxa lagu dheeli doonaa magaalada Turin oo garoonka ay albaabadu u xirnaan doonaan.” ayuu yiri Madaxweynaha Lyon ee Jean-Michel Aulas oo u warramayey RTL.
Inkastoo xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA uu xaqiijiyay Kooxaha Juventus iyo Lyon xilliga uu kulankoodu dhacayo, haddana kooxaha kulammadu iskugu harsan yihiin ee wareegga 16-ka UCL sida Manchester City vs Real Madrid, Barcelona vs Napoli iyo Bayern Munich vs Chelsea ayaan wali la ogeyn wakhtiga la qaban doono oo aan kooxahana go’aan la la wadaagin.
Waa kuwee xiddigaha ugu goolasha badan kooxda Arsenal 28 xilli ciyaareed oo Premier League ah?
Liverpool oo xiisaynaysa inay heshiis amaah ah kula soo wareegto xiddig khadka dhexe kaga ciyaara Kooxda Tottenham